Sanadka 2019, faylalka McKnight wuxuu soo saaray 1,869,495 MW oo tamar la cusboonaysiin karo | Credit: Oleksii Sidorov
Sida Mu'asasada McKnight ay u Maalgalinayso Deeqdeeda Bilyan ee $3 si ay ula dagaallanto Isbedelka Cimilada
Wareysigan ayaa asal ahaan kasoo muuqday Dabacsanaanta Philanthropy waxaana dib loogu daabacay halkan oggolaansho buuxda.
Isagoo hogaaminaya shirwaynaha cimilada aduunka ee todobaadkan ka dhacaya Glasgow, Ford Foundation iyo MacArthur Foundation mid kastaa wuxuu ku dhawaaqay inay bilaabayaan inay ka saaraan maalgelinta shidaalka ee deeqahooda, iyagoo ku biiraya ku dhawaad 1,500 hay'adood oo caalami ah kuwaas oo sidoo kale ka go'an nooc ka mid ah leexinta. marka loo eego Divest Invest Philanthropy, koox u ololaysa u gudubka dhaqaalaha eber-carbon.
Mid ka mid ah hay'adahaas, McKnight Foundation, ayaa kor u qaaday faa'iidada iyada oo leh ku dhawaaqida shir madaxeedka ka hor. Marka la gaaro 2050 waxay ku tala jirtaa inay maalgeliso deeqdeeda, oo hadda lagu qiimeeyay $3 bilyan, si ay u gaarto "eber saafi ah," taasoo la macno ah saameyn qiiqa dhexdhexaad ah oo deegaanka ah. Go'aankaas ayaa ku lug leh kaliya maahan in laga leexiyo shirkadaha shidaalka, laakiin sidoo kale iibinta saamiyada warshadaha kale, iyo sidoo kale ku dhejinta shirkadaha ka shaqeeya beddelka dhaqaalaha ku salaysan kaarboonka.
Madaxa fulinta ee mas'uulka ka ah hogaaminta maalgashiga McKnight ee ku wajahan dawlad dhexdhexaad ah kaarboon badhtamaha qarniga waa Elizabeth McGeveran. Ka dib markii ay ku biirtay aasaaska fadhigeedu yahay Minneapolis, 2014, waxay dhistay a $500 milyan loogu talagalay in lagu yareeyo qiiqa kaarboonka hoose iyo in la abuuro soo-celin dhaqaale. Sannadkii 2019 waxa loo magacaabay maamulaha maalgashiga ee aasaaska.
McGeveran waxa uu qiyaasaa in boqolkiiba 40 ka mid ah deeqaha deeqaha bixiya ay ka qayb qaadato dadaalka ay ugu jirto ka bixitaanka shidaalka fosil iyo horumarinta u gudubka dhaqaalaha cagaaran. Talaabada xigta, ayay tidhi, waa in lagu xisaabtamo boqolkiiba 60 ka soo hadhay oo la cabbiro guud ahaan xogta qiiqa deeqda.
Elizabeth McGeveran ayaa sheegtay in qayb weyn oo ka mid ah habka McKnight Foundation ay tahay in la maalgeliyo shirkadaha ka caawinaya warshadaha samaynta kala-guurka tamarta. Xuquuqda sawirka: Molly Miles
Kala soocida iyada oo loo marayo maalgashiyada shakhsi ahaaneed ee shirkadaha ganacsiga dadweynaha si loo qiyaaso qiiqa qiiqa waxay noqon doontaa mid sahlan in la sameeyo, McGeveran ayaa leh. Waxaa laga yaabaa in caqabadda ugu weyn, ayay tiri, waa in la go'aamiyo raadka kaarboon ee shirkadaha gaarka loo leeyahay ee ku xiran faylalka badan ee maalgashiga ee ay qabtaan maareeyayaasha dibadda.
Qayb weyn oo ka mid ah habka, McGeveran wuxuu sharxayaa, waa in la maalgeliyo shirkadaha ka caawinaya warshadaha samaynta kala-guurka tamarta.
Waxay soo xigatay laba shirkadood oo aasaasku uu saami ku leeyahay iyada oo loo marayo maalgashigeeda G2 Venture Partners, shirkad ganacsi-caasimad ah oo diiradda saareysa caawinta warshadaha jira inay noqdaan kuwo cagaaran. Hal shirkad, Convoy, ayaa adeegsata tignoolajiyada si ay u maareyso raxannada xamuulka qaada si ay u yarayso tirada mayl-yada la kaxeeyo iyada oo aan shixnad lahayn.
Mid kale, AiDash, waxay isticmaashaa xogta dayax-gacmeedka si ay uga caawiso bixiyeyaasha adeegga inay fahmaan halka ay tahay inay ka nadiifiyaan daaqsinka xadhkahooda korontada. Joogteynta wax qabadka korontadu waa lama huraan haddii waddanku uu u wareegayo awoodda dib loo cusboonaysiin karo, McGeveran ayaa leh, isagoo xusay in ku dhawaad rubuc dhammaan korontadu ay sababto burburka laamaha geedaha iyo kororka kale. Joojintaas waxay dhaawacday hay'adaha yaryar ee aan faa'iido doonka ahayn iyo ganacsiyada, kuwaas oo intooda badan aan lahayn awood ay wax ku soo saaraan, sida ganacsiyada waaweyni ay sameeyaan.
Guusha AiDash waxay yeelan kartaa "saameyn rogrogmi karta" iyadoo gacan ka geysaneysa ilaalinta awoodda dadka ku nool xaafadaha dakhligoodu hooseeyo halkaasoo aasaaska ay ku bixiso lacag badan oo deeq ah, McGeveran ayaa leh.
AIDash waxay ka caawisaa adeegaha inay hagaajiyaan isku halaynta iyagoo isticmaalaya satalaytka. Xuquuqda sawirka: American Public Power Assoc.
Kolonyo waa shabakad xamuul oo dhijitaal ah oo ka caawisa baabi'inta qashinka kaarboonka. Xuquuqda sawirka: Bailey Alexander on Unsplash
Sheekada eber Net
Elizabeth ayaa la hadashay Taariikhda oo ku saabsan caqabadaha gaadhista eber saafiga ah, iyo awoodda ay kuwa wax-sameeyayaasha iyo maalgashadayaasha kale ee hay'adaha bixiyaba ku leeyihiin beddelka hab-dhaqannada suuqa.
McKnight waxa ka go'an in uu gaadho eber saafiga ah 2050. Sidee taasi uga duwan tahay ka leexinta shirkadaha shidaalka?
eber saafiga ah asal ahaan waa hab dhamaystiran oo lagu eegayo qiiqa gaaska aqalka dhirta lagu koriyo ee dhammaan qaybaha faylalkayaga. Waxay ku lug yeelan doontaa dhimista qiiqa hawada ugu daran, kaas oo laga saari doono faylalkayaga. Iyo, dabcan, kuwa ugu daran ee hawada sii daaya waa shirkado shidaal-burbureed ah. Laakiin ma eegayno oo keliya qiiqa sii daaya shidaalka. Waxaan si ballaaran u eegi doonnaa warshadaha, adeegyada, iwm.
Waxaa jira fiiro gaar ah oo la siinayo sidii loo dhimi lahaa qiiqa ceyriinka ah [ka leexinta soosaarayaasha saliidda iyo gaasta]. Waxaan xiiseynayaa maalgelinta faylalka aan kaliya dhimin gaaska aqalka dhirta lagu koriyo ee heerarka hadda jira, laakiin sidoo kale leh badeecooyin, adeegyo, maalgashi, iyo shirkado dhab ahaantii hagaajinaya gaaska aqalka dhirta lagu koriyo.
Tusaalahaas waxaa ka mid ah maalgashiga beeralayda cadceedda. Ma aha oo kaliya inay leedahay astaanta qiiqa yar lafteeda, laakiin waxay dhab ahaantii wax ku biirinaysaa saacadaha megawatt ee tamarta la cusboonaysiin karo ee shabaqyada. Taasi waa nooc ka mid ah fikradda muuqata, laakiin haddii aan eegno isbeddelka tamarta nadiifka ah ee dhamaystiran ee dhaqaalaheena, markaa waxaa jiri doona doorar shirkad kasta, badeecad, iyo adeegba si ay u noqdaan kuwo cusub oo abuuraya waxa cusub ee tamarta nadiifka ah. dhaqaaluhu dhab ahaantii wuxuu u eg yahay.
Waxaa naga go'an in aan kaarbooneysiinno [yaraynta maalgashiga shidaalka fosil] ee faylalkayaga ilaa 2014. Markaa tani maaha hawl cusub oo McKnight ah. [Gelitaanka eber eber] waa tallaabada xigta ee macquulka ah ee waxa aan samaynaynay markii aan kaarboonaynaynay.
"eber Netka asal ahaan waa hab dhamaystiran oo lagu eegayo qiiqa gaaska lagu koriyo ee dhammaan qaybaha kala duwan ee faylalkayaga…
Halkeed ka taagan tahay hadda si aad u gaadho booska saafiga ah?
Xoojinta kaarboonka ee maalgashigayada sinnaanta dadweynaha ayaa ka hooseeya heerka cabbirka. Way ka fudud tahay qiiqa aqalka dhirta lagu koriyo. Bootfooliyada gaarka ah aad bay u adagtahay in la qiimeeyo. Shirkadaha gaarka loo leeyahay ma sameeyaan warbixino dadweyne oo badan oo loogu talagalay maal-gashadayaasha hay'adaha [sida kaydka sarrifka si guud loo iibiyo]. Markaa waxaanu ku tiirsanaan doonaa maamulayaashayada sanduuqa inay hawshan noo qabtaan. Markaa halkii aad ka odhan lahayd maareeyaha gaarka ah, “Ma leedahay shirkad shidaal fosil ah,” waxaanu ku odhan doonaa maamulaha gaarka ah, “Waa maxay astaanta qiiqa faylalkan oo dhan ee aad adigu annaga naga wakiil tahay?” Waxaan si qoto dheer oo faahfaahsan u eegi doonaa sida ay u egyihiin maalgashiyadayada gaarka ah.
Waxaan sidoo kale dhisnay faylalka gaarka ah ee $500 milyan oo ay maalgaliyeen maamulayaasha sanduuqa kuwaas oo ay tahay in ay isticmaalaan mawduucyada isbeddelka cimilada marka ay raadiyaan maalgashi. Markaa waxaanu hore u haysanaa faylal weyn oo xalinaya cimilada. Taas ayaanu wadnay tan iyo 2014. 2014 waxa kale oo aanu iibinay dhammaan soo-gaadhista dhuxusha ee ka timi faylalka curaartayada. Sannadkii 2018-kii waxa aanu waydiisanay xisaabaadkayada sida gaarka ah loo maareeyo in aan ka iibino soo gaadhista ciidda daamurka ee Kanada. Markaa waxaanu samaynaynay waxoogaa iibinta hantida.
Maareeyayaasha maaliyaddu miyay dallacaan khidmad lagu aqoonsanayo soo-gaadhista qiiqa?
Ma jiro lacag dheeraad ah Waxaan leenahay doorar kala duwan maalgaliyaha hay'ad ahaan, waxaanan isku daynaa inaan mid walba ka faa'iidaysano anagoo ka wakiil ah hadafkeena. Markaa taasi waxay la macno tahay in la beddelo sida aan u maalgashanno. Waxa kale oo ay la macno tahay in aan u isticmaalno awoodda macaamiishayada adeeg bixiyayaashayada maaliyadeed ama maalgashiga si ka sii xoog badan - haddii ay si qoto dheer ugala hadlayso kala duwanaansho la'aanta miiska maalgashigooda ama waydiiso inay noo sameeyaan noocyo kala duwan oo cabbirro ah oo nagu saabsan waxyaabaha aan samayno. u tixgeli inay muhiim tahay.
Waxaan sidoo kale u codeyneynaa dhammaan wakiilladayada shirkadaha dadweynaha. Waxaan u codeyneynaa dhammaan saamiyadeena si aan u taageerno xalalka cimilada iyo soo jeedinta cimilada. Waxaan sidoo kale miisaameynaa [Komishanka Amniga iyo Sarrifka ee Mareykanka], kaas oo hadda amraya in la shaaciyo khatarta cimilada ee shirkadaha ganacsiga guud. Waxaan u baahanahay inaan ka soo muuqanno noocyada deegaan sharciyeed si aan u hubinno in mas'uuliyiinta suuqyadu ay dhab ahaantii ku tiirsan yihiin tixgelinnadan muhiimka ah marka ay samaynayaan xeerar.
Waxaan filayaa in hal ama laba sano gudaheed, aan bilaabi doono inaan aragno isweydaarsiga u baahan shirkadaha si guud u taxan inay ka warbixiyaan qiiqa gaaska aqalka dhirta lagu koriyo. Waxaan filayaa inay taasi noqon doonto kharash ganacsi u samaynta shirkadaha haddii ay rabaan in lagu kala iibsado suuqyada dadweynaha.
Markaa gunta hoose ma aha in aan waxan oo dhan samayno nafteena. Waxay ila tahay waxa cabsi gelinaya aasaaska qaar inay tahay fikradda ah inaysan haysan shaqaale ama khibrad gudaha ah oo ay ku qabtaan shaqadan oo dhan. Oo, waad ogtahay, waxaan u isticmaalnaa maareeyayaasha sanduuqa sabab. Waxay leeyihiin khibrad badan oo aynaan lahayn, tanina waxay u baahan tahay inay ka mid noqoto.
Maxaad u dooratay 2050 inaad noqoto eber saafi ah? Taasi miyaanay fogayn?
Waxay noqon doontaa ka dib markaan ka fariisto shaqada Waa wakhti dheer. Waxay noo tahay gees bannaanka ah, ma aha taariikhda ugu dhow ee suurtogalka ah. Maalgelintayada gaarka ah waxay ka kooban tahay abuur iyo raasamaal ganacsi si ay u iibsadaan shirkadaha ilaa hantida dhabta ah [sida hantida ma-guurtada ah, biraha, iyo badeecadaha]. Maalgelintayada gaarka ah waxay soconayaan waqti dheer. Markaa waxaad samayn kartaa maalgashi gaar ah oo soconaya 15 ilaa 20 sano. Noocyada maalgashiga qaarkood, waxaad samaynaysaa maalgelinta waana inaad la noolaato. Markaa taariikhda dhamaadka 2050 waa muhiim, laakiin waxay la macno tahay in ficilku u baahan yahay inuu dhaco hadda.
Miyaad u isticmaali doontaa maalgelinta tamarta dib loo cusboonaysiin karo si aad u daboosho maalgashiga shirkadaha qiiqa si loo gaaro yoolka?
Maalgashadayaasha qaarkood waxay leeyihiin qorshooyin ku tiirsan dib u habeyn. Taasi waxay noqonaysaa doorashayagii ugu dambeeyay ee suurtogalka ah, mana aha mid ka mid ah xeeladaha aan isla markiiba adeegsan doono, sababtoo ah waxaan raadineynaa inaan dhab ahaantii saameyno aduunka dhabta ah. eber saafiga ah ee McKnight maaha layli xisaabin. Waxaan runtii xiisaynaynaa dhimista qiiqa adduunka dhabta ah. Offsetsku waa dhamaadka ciyaarta, maaha bilawga ciyaarta.
Doorkee ayay ku yeelan kartaa samafalayaasha gaarka loo leeyahay, oo ay ka gaabiyeen maalgashadayaasha kale ee hay'adaha?
Aasaasyadu waxay leeyihiin saameyn aad u weyn maalgashadayaasha ahaan, inkastoo laga yaabo inaan yareyno. Inta badan marka madaxweynaha mu’asasada ahi muraayadda ka eego, waxa ay dib u eegaan waa samafale. Taasi waa ganacsigeena ugu weyn. Waxaan nahay samafale. Taasi waa waxa aan samayno si aan u samayno isbeddel bulsho. Si kastaba ha ahaatee, deeqdayada $3-bilyan waxay ka dhigan tahay marka aan eegno muraayadda, waa inaan sidoo kale aragnaa maalgeliyaha hay'adaha. Ballanqaadkani waxa uu ina siinayaa fursad aan ku abaabulno dhammaan agabkeenna oo aan isku dayno inaan gacan ka geysanno xallinta xiisadda cimilada.
Waxaa jira wax badan oo suurtagal ah oo loogu talagalay abaal-marin maaliyadeed. Waxqabadku waa jiraa. Anaguna waxaanu nahay deeq-bixiyeha ugu wayn ee deeqaha cimilada ee Midwest. Waxaa na saaran mas'uuliyad si aan u hubinno in doollarkeenu uu wado kala-guurka tamarta muhiimka ah.
"Markaan eegno muraayadda, waa inaan sidoo kale aragnaa maalgeliyaha hay'adaha. Ballanqaadkani wuxuu na siinayaa fursad aan ku abaabulno dhammaan agabkeenna oo aan isku dayno inaan gacan ka geysanno xallinta dhibaatooyinka cimilada.
Sidee baa helitaanka maalgashi la barbardhigayaa 2014, markii aad bilowday inaad kaarboonaysiiso?
Waxaan mar walba awoodnay inaan helno maalgashi wanaagsan. Laakiin tirada doorashada ee aan hadda ku haysanno suuqa ayaa si weyn uga duwan. Waxaan leenahay ikhtiyaaro labadaba fasalada hantida ee kala duwan iyo noocyada maamulayaasha fund. Waxaan hadda aragnaa qaar ka mid ah jilayaasha waaweyn ee sinnaanta gaarka ah, sida KKR, oo soo bandhigaya lacagahan cimilada ee megabillion-dollar ah. Kuwaasna lama helin siddeed sano ka hor.
Qaar waxay ku eedeeyaan lacag badan inay "cagaar dhaqid," ama abuuraan aragtiyo been ah oo ku saabsan sida ay uga go'an tahay isbeddelka deegaanka. Ma aaminsan tahay in maalgelinta lacagahaas ay yareeyaan qiiqa qiiqa?
Uma dadaalin iyaga, qayb ahaan sababtoo ah si gaar ah uma xiisayneyno kuwan mega ah, maalgelinta mega. Laakiin lacagahaas waxay iibsanayaan shirkadaha ku jira faylalkayaga hadda. Helitaanka lacag sidaas oo kale ah waxay abuuraysaa fursado bixitaan noocyada maalgashi ee aan ku haysanay lacagteena siddeedii sano ee la soo dhaafay. Helitaanka jilayaasha qayb kasta oo ka mid ah silsiladda maalgashiga ayaa runtii muhiim u ah abuurista nidaamka deegaanka ee run ahaantii shaqeeya.
U baratanka eber saafiga ah: $3 Billion Endowment wuxuu helayaa xitaa nadiifin iyo cagaar
By Elizabeth McGeveran, Dan Thiede Noofambar 2021